UMGANGATHO WEVINYL KWIIPROPATI ZEGUMBI LOKUHLAMBELA KUNYE NENGXAKI - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Umgangatho weVinyl kwiipropati zeGumbi lokuhlambela kunye neNgxaki
Apha sabelana ngomgangatho we-vinyl kumgangatho wokuhlambela kunye neengozi kubandakanya iindidi ezahlukeneyo kwaye loluphi uhlobo lwesitayile olulungele uyilo lwakho lwangaphakathi. Enye yeentlobo ezithandwa kakhulu kumgangatho wabanini bamakhaya yimigangatho ye-vinyl yokuhlambela. Isisombululo esifanelekileyo, hayi kuphela ngenxa yobuhle bayo kodwa nokuqina kwayo.
Ukusuka kukhetho olukhulu kumgangatho wegumbi lokuhlambela, ezi ntlobo zemigangatho ye-vinyl zikwajongwa njengezoqoqosho ngexabiso elikhulu. Yiyo loo nto, ikhethwa kakhulu kwezorhwebo, kwintengiso, nakwicandelo lokuhlala.
Ngenxa yoluhlu olubanzi lweendlela, ubukhulu, imilo, kunye noyilo- olu khetho lophahla lunokujonga ngaphandle komthungo nakweyiphi na indlela yoyilo lwangaphakathi.
Yintoni iVinyl yaphantsi yegumbi lokuhlambela?
Iiplanga zeVinyl zaphansi kunye neZinto eziBalulekileyo
Iindidi zegumbi lokuhlambela leVinyl
Umgangatho oPhambili weVinyl kumagumbi okuhlambela
Ke iyintoni ngokwenene i-vinyl kwaye yenziwe ngantoni? Ewe, i-vinyl ngumzala we-linoleum owenziwe ngamabala kunye nokunganyangeki kwamanzi ngaxeshanye.
Ukusebenza kwayo ngokungafaniyo, ukufikeleleka, kunye nokuqina kwayo kwenza ukuba kube yinto efanelekileyo ukuba isetyenziswe kwigumbi lokuhlambela nakwamagumbi okulala kunye namagumbi okuhlala.
Elinye inqaku ekufuneka liqatshelwe kukuba zinokusetyenziswa kwiindawo ezihamba abantu abaninzi ezinje ngamashishini kunye neeofisi kunye neekhefi kunye neeresityu. Kwaye oku kungenxa yokuba kulula ukuzigcina kwaye zicocekile - ukosula nje okumanzi kungaphezulu kokwaneleyo ukugcina izinto kwindawo ezixakekileyo.
Sisiphi isipho sokuzibandakanya
Zimbini iintlobo zomgangatho we-vinyl: Iplanga ye-vinyl okanye i-sheet yaphansi kunye ne-vinyl tile tile.
Xa uhlaziya okanye uhlaziya kwakhona izindlu zangasese, owona mba uphambili wokuxhalabisa ngumgangatho. Kuba le ndawo ithambekele ekubumbeni nasekufuma, kubalulekile ukuba ukhethe eyona nto ifumanekayo inika ezona zibonelelo zilungileyo.
Kwixesha elidlulileyo, iithayile zeceramic kunye ne-porcelain zaziqaqambile - nangona kunjalo, ngokuchaseneyo nexesha langoku, iiplanga zodidi lwevinyl kunye neetayile zewayini ze-vinyl zenza iindaba eziphambili. Umgangatho weVinyl ubukho ngaphezulu kweminyaka eyi-100 ngoku kwaye ubonelele ngeenzuzo ezinkulu xa kufikwa kumba wokuqina kunye nokuqina.
Amagumbi okuhlambela kunye neekhikhini zezona ndawo ziphambili kumgangatho we-vinyl. Ukuba lukhetho olunobunzima obusezantsi, i-vinyl flooring ayinakuphikiswa kwaye iyamelana namanzi.
Inokuthi ikwazi ukujongana nokufuma, umphunga, kunye nokufuma kumagumbi okuhlambela anokuthi abangele ukungunda kunye nendawo engenampilo kwizithuba zakho. Kweli xesha langoku, i-vinyl flooring iyafumaneka nge-underlayment eqhotyoshelweyo okanye nge-thickness malunga ne-8mm okanye ngaphezulu.
Ngapha koko, le mveliso inokufakwa ngokulula (ngamanye amaxesha i-DIY) ngenkqubo yokuncamathelisa okanye ucofe ukhiye okanye indlela yokufaka evaliweyo. Lindela ukuqina okukhulu kwigumbi lakho lokuhlambela kule vinyl yaphantsi!
Kukho izibonelelo ezinkulu ezibonelelwa ngumgangatho we-vinyl owenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela. Nalu uluhlu lwezinto ezintle ekufuneka uziqaphele:
1. Ukufikeleleka - Umgangatho weVinyl uthathwa njengezinto ezingabizi kakhulu ukuthenga kunye nokufaka. Xa kuthelekiswa nolunye ukhetho olunxulumene nomgangatho womgangatho, ngokuqinisekileyo le yeyokuya ukuba uhlahlo-lwabiwo mali.
2. Ulondolozo - Olunye uncedo oluphambili olunikezelwa ngumgangatho we-vinyl kukugcina kulula. Xa kuziwa ekucoceni nasekulondolozeni, ezi ndlela zokubeka umgangatho ngokuqinisekileyo zibonisa ukuba kufuneka!
Kwigumbi lokuhlambela, zifuna kuphela ukucoca kunye nokucoca yonke imihla ukugcina nokwenza umgangatho ubonakale ucocekile kwaye ucocekile. Sukuba nexhala! Imopu enamanzi afudumeleyo yindlela yokucebisa yokugcina nokucoca olu khetho lophahla.
3. Ukuxhathisa kwamanzi - Enye yeenzuzo ezikhethwa kakhulu, i-vinyl flooring inikezela ngamandla okuhlala emanzini nakumswakama. Ungahlamba kamnandi okanye ulahle amasuntswana amanzi ngaphandle kokukhathazeka ngomgangatho wokonzakala- kuba inamandla amakhulu okumelana namanzi.
4. Ukonwaba ukuhamba - Umgangatho weVinyl uziva uthambile, ukhululekile, kwaye ushushu phantsi kweenyawo. Le yenye yezona zinto zingahoywanga- nangona kunjalo, inyani kukuba ibalulekile.
Umgangatho wegumbi lokuhlambela uhlala uziva ubanda kwaye umanzi ngenxa yomswakama ogciniweyo- kodwa i-vinyl inokukunceda kulo mba kwaye yenze igumbi lokuhlambela lizive lihle. Ngokungafaniyo nezinye iinketho zomgangatho, unokuma ngokuqinileyo kulo mgangatho kangangeeyure ezinde.
5. Olunye uhlobo olukhulu kwezinye iindidi zomgangatho -Ngokuchasene nomthi, ilitye lendalo, kunye nethayile- olu khetho lophahla lubonelela ngendlela enkulu yokunxiba kunye nokukrazula. Ngenxa yezi zizathu zikhankanywe apha ngasentla, lo mgangatho ubeka ukuba ungoyena ubalaseleyo kushishino.
Igumbi lokuhlambela leVinyl
Ngaphandle kwezi zibonelelo zibalaseleyo, kuyinyani ukuba i-vinyl flooring inezinto ezithile ezinokuthanani nazo. Ewe, nolu uluhlu lweengozi ekufuneka uzithathele ingqalelo ngaphambi kokufaka i-vinyl flooring kwindawo yakho yangasese.
1. Ayinakuboliswa yintsholongwane - Ke, kubo bonke abaninimzi abashumayela ngokusingqongileyo kunye nozinzo, kubalulekile ukuba wazi ukuba i-vinyl flooring ayinakuphindwa iphinde isetyenziswe.
Ayinakuboliswa ziintsholongwane, kwaye ichaphazela imeko-bume ngendlela engeyiyo- ewe, ekuhambeni kwexesha. Yiyo loo nto ukuphilisa iplanethi- le ayisiyiyo enye yezona khetho zibalaseleyo.
2. Kunzima ukususa -Umgangatho weVinyl xa uncanyathiselwe ezantsi kunokuba nzima ukususa. Ke, ukuba uyahlaziya okanye uphucula umgangatho wezindlu zakho zokuhlambela- kusenokwenzeka ukuba ikhontraktha yakho ijongene nobunzima ekususeni imigangatho.
Yiyo loo nto kusoloko kucetyiswa ukwazisa abaqeqeshi malunga nokungasebenzisi iglu ukunamathela i-flooring-kunokuba ukhethe indlela evulekileyo okanye ucofe indlela yokutshixa.
indlela yokuthintela iinwele ezingenayo kumgca webikini
3. Kulula ukuhlaba -Ukuba le nto ithambile xa ithelekiswa nezinye izinto ezinje ngethayile, umthi onzima, okanye ilitye- kusenokwenzeka ukuba ukuzinza kwento leyo kuchaphazeleke.
Olu khetho lophahla lunokugqobhoza ngokulula ngemela okanye ngento ebukhali- okanye kwezinye iimeko, itafile yesinyithi esityibilikayo okanye ucango lunokuthintela amandla ezinto. Ukubeka izinto ezinzima kunokubangela imiphunga ngaphezulu.
4. Ixabiso eliphantsi -Uya kumangaliswa kukwazi ukuba i-vinyl flooring ayongezi kwixabiso elipheleleyo lamakhaya akho. Ibiza ixabiso eliphantsi kwaye inokufakwa ngokulula ngabanini bamakhaya ngokwabo- yiyo loo nto ukuba uceba ukuthengisa indlu yakho kungekudala - le nto ayinakongeza okanye iphazamise ixabiso layo lokuthengisa kwakhona.
5. Ukugqitywa komgangatho osezantsi -Kodwa nangona umbandela ngokwawo uqinile - nangona kunjalo, isambatho sangaphezulu asiyiyo. Kuba ayimelani ne-UV-ibonisa ngokulula iimpawu zokujika kombala kunye nokubuna emva kwexesha elinomdla. Qinisekisa ukuba akukho langa lithile lingena kwigumbi lakho lokuhlambela!
Umgangatho weVinyl uyafumaneka kwiindidi ezintathu: iphepha, iplanga, kunye nethayile. Ukuthelekisa zonke ezi zinto, i-vinyl sheet sheet yileyo ekufuneka isetyenziswe kwigumbi lokuhlambela apho kukho ukugqitha kwamanzi. Makhe sixoxe ngokweenkcukacha malunga typology nganye ethile.
Elinye lawona maphepha makhulu, iivinyl ziyafumaneka kubungakanani phantse beenyawo ezi-6 ukuya kwii-16 iinyawo. Ziqulathe iphepha eliqhubekayo lepolymer eyenziweyo enomaleko ogqibeleleyo ‘wePV’ enika ukutyibilika ipateni, umbala kunye nemvakalo.
Ngaphezulu koku kukho olunye umaleko wokukhusela umaleko ongaphantsi ngokuchasene nokuwohloka okungafunekiyo.
Olu hlobo lophahla luyafumaneka kwimiqolo emikhulu- yiyo loo nto, kukho iindlela ezincinci kunye nendlela enkulu yokugxotha amanzi. Ke, kwimeko yokuba unendawo yokuhlambela encinci, akunakubakho seams kwaphela-eyona nto iphambili yokudibanisa. Nangona kunjalo, le ndlela ibiza kakhulu kuneethayile zevinyl.
Umxube wamatye ekalika wendalo, izinto zokugcwalisa, imibala yombala, kunye nezihlanganisi ze-thermoplastic- ezi tile zinendlela ekunzima ngakumbi ukuyigcina kunamaphepha e-vinyl. Yiyo loo nto banokufuna ukhathalelo oluhlala lubenza babambe ulondolozo oluphezulu ngaphezulu kweminyaka.
Ngenxa yemigangatho ekhoyo phakathi kweethayile, kunokwenzeka ukuba amanzi angene kwaye amkhulule umdlali ongaphantsi kwexesha elithile.
Kwelinye icala, into ephambili kukuba le mveliso inokufakwa ngokulula kwaye inezoqoqosho olukhulu xa kuthengwa kwaye kufakwa. Bona Okuninzi Imibono yethayile yangasese yangasese Apha.
Kuyafana nakwimashiti ye-vinyl, olu lukhetho olucetyiswayo kumagumbi akho okuhlambela. Lo mgangatho ngokuthelekiswayo unamanzi amaninzi, ufikeleleka kwaye uzinzile.
Unokwenza ngokulula i-DIY le flooring ekhaya - ngokuvumela ubunzima obuncinci kulondolozo kunye nokulungiswa. Kwakhona banikezela ngobomi obude kakhulu-ke ezi planga kunokwenzeka ukuba zihlale ixesha elide kunokuba bekulindelwe.
Ndwendwela eli phepha ngaphezulu malunga neentlobo ze Umgangatho ongangeni manzi kwindawo yokuhlambela .
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yezona zikhethi zomgangatho we-vinyl ezifanelekileyo kwigumbi lokuhlambela yiphepha le-vinyl. Eyona njongo iphambili yomgangatho wegumbi lokuhlambela kukugcina kunye nokugxotha amanzi- kwaye inokufezekiswa ngokulula kusetyenziswa amashiti e-vinyl.
Iti yetheko lomtshato womtshato
Kuba ezi mveliso ziyafumaneka kwimiqolo emikhulu, zinokusetyenziselwa ngaphandle komthungo kwiindawo zokuhlambela ngaphandle kwekhefu kunye nokuthungwa.
Kwimeko yamagumbi okuhlambela amancinci, iiroll zinokwanela ukugubungela umgangatho wenyawo. Ngapha koko, banceda ukumisa ukungeniswa kwamanzi kwi-subfloor -ukuqhubeka, ukuthintela ukonakala kumaleko angaphantsi.
Ininzi yale nto ngumsebenzi owenzayo, ke kwimeko yokulungiswa kunye nokuhlaziywa, amaphepha e-vinyl anokusetyenziswa ngokulula ngexesha elifutshane kakhulu.
Ngaba kukho naziphi na izinto ezilungileyo kunye neengozi zomgangatho we-vinyl esilahlekileyo, kwaye uyakonwabela ukufaka i-vinyl flooring ekhayeni lakho? AmaSpredishithi okanye iiPlanki? Ndazise iingcinga zakho kwezi zimvo zingezantsi.
Funda ngakumbi malunga Umahluko phakathi komgangatho we-laminate kunye ne-vinyl Apha.
Uyilo locingo lwelatti
iilokhwe zomtshato oluhlaza kunye nobukhulu
indlela yokujongana nezimemo zomtshato kunye nenye
yeyiphi iringi yomtshato
uxelele njani ubungakanani beringi oyiyo
iingcebiso malunga nokususa induna
iindawo zokwenza umtshato